Mofon’aina – FJKM Avaratr'Andohalo
Ny loholona sy ny diakona
Ny asa misiona / CWM
Ireo hetsika samihafa
Mba fantatrao ve ?
Komity ny Akany
NY AKANY SY AVA ILAIVOLA
Ny Sekoly AA
MOFONAINA F.J.K.M. AVARATR’ANDOHALO
Ny vatsim-panahy atolotra eto dia fanazavana ny lohahevitra isam-bolana voalahatra ao amin’ny Perikopa FJKM. Ny fampianarana sy fanazavana atao isaky ny fivorian’ny Mpandray, amin’ny Alahady fahefatra isam-bolana no hofintinina eto amin’izany, na toriteny iray tao anatin’ny volana diavina.
JEREMIA 3.11-17: « Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao »
Andriamanitra fitiavana tokoa ny Tompo. Na dia niodina taminy aza ny Zanak’ Israely dia antsoiny indray hiverina Aminy . Ireto no antony hiverenana amin’Andriamanitra :
1-Hamindra fo amin’izay miverina Aminy ny Tompo
Raha ny marina , noho ny fiodinan’ny Zanak’ Israely dia tokony ho tezitra aminy ny Tompo. Tsy izany anefa no hita eto fa vonona hamindra fo amin’izay niodina ka maneho fahavononana hiverina ny Tompo. Dieny mbola misy fotoana dia andeha hararaotina ny fotoana hahafahana manatona ny Tompo. Andeha hararaotina tsara ny fotoana hamindran’ny Tompo fo amintsika ka mbola handraisany antsika indray. Ity fiverenana ity koa anefa dia voamariky ny faneken’ny mpiodina ny helony araka ny and 13. Araka izany , tsy ho afa-miverina amin’ny Tompo izay tsy miaiky ny fahotany , ka tsy miala amin’izany . Fepetra tsy azo ialana amin’ny fiverenana marina amin’ny Tompo ny fanekena ny fahadisoana sy ny fiezahana hiala amin’izany fahadisoana izany .
2-Hanome mpitarika ho amin’ny fahendrena ny Tompo
Niodina ny Zanak’Israely satria ratsy mpitarika izy. Rehefa miverina amin’ny Tompo ny vahoakany eto dia hanome mpitarika azy ny Tompo mba tsy hiodina intsony Aminy izy ireo . Efa nomen’ny Tompo an’i Jesoa hitarika antsika isika . Jesoa mantsy no manana ny fahendren’ Andriamanitra araka ny fampianaran’i Paoly (1 Kor 1.24) . Hanam-pahendrena toa Azy izay manaiky hotarihany ka tsy hiala amin’ny Tompo intsony . Rehefa ao amin’i Jesoa ny olona iray dia ho tafatoetra tsara ao amin’ny Tompo. Jesoa no miantoka antsika tsy hiala amin’Andriamanitra sy hitoetra tsara ao.
Sabotsy, 29 Febroary 2020
6 Ary hoy izy tamiko: Mahatoky sady marina ireo teny ireo; ary ny Tompo, Andriamanitry ny fanahin’ny mpaminany, naniraka ny anjeliny haneho amin’ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. 7Ary, Indro, avy faingana Aho; sambatra izay mitandrina ny tenin’ny faminaniana amin’ity boky ity.
8 Ary izaho Jaona no nahare sy nahita ireo zavatra ireo. Ary rehefa nahare sy nahita aho, dia niankohoka hivavaka teo anoloan’ny tongotr’ilay anjely naneho ahy ireo zavatra ireo.
9 Dia hoy izy tamiko: Tandremo, aza manao izao; fa mpanompo namanao ihany aho sady naman’ny mpaminany rahalahinao sy izay mitandrina ny teny amin’ity boky ity; Andriamanitra ihany no ivavaho.
Sabotsy, 21 Martsa 2015
Mat 10, 16 – 20
16 Indro, Izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan’ny amboadia; koa hendre tahaka ny menarana, ary morà tahaka ny voromailala.17 Ary mitandrema ianareo noho ny amin’ny olona; fa hatolony ho amin’ny Synedriona sy hokapohiny ao amin’ny synagogany ianareo; 18 ary hoentiny eo anatrehan’ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny Amiko, ho vavolombelona aminy sy amin’ny jentilisa.
19 Fa raha manolotra anareo izy, dia aza manahy ny amin’izay fomba hitenenanareo, na izay holazainareo; fa homena anareo amin’izany ora izany izay holazainareo. 20 Fa tsy ianareo no miteny, fa ny Fanahin’ny Rainareo no miteny ao anatinareo.
Alatsinainy, 23 Martsa 2015
Mat 15, 21 – 28
21 Dia niala teo Jesoa ka nankany amin’ny faritanin’i Tyro sy Sidona.22 Ary, indro, nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy tamin’izany tany izany ka niantso nanao hoe: Mamindrà fo amiko, Tompoko, Zanak’i Davida ô! ny zanakovavy ampahorin’ny demonia loatra.23 Fa Izy tsy namaly teny azy. Dia nanatona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe: Roahy izy, fa miantso mafy ato aoriantsika. 24 Ary Izy namaly ka nanao hoe: Tsy nirahina Aho afa tsy ho amin’ny ondry very amin’ny taranak’Israely. 25 Fa nanatona ihany ravehivavy, dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe: Tompoko ô, vonjeo aho. 26 Fa Izy namaly ka nanao hoe: Tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an’ny amboakely. 27 Fa hoy ravehivavy: Marina izany, Tompoko; fa na dia ny amboakely aza mba mihinana izay sombintsombiny latsaka avy amin’ny latabatry ny tompony ihany.28 Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Ravehivavy ! Lehibe ny finoanao ! Tongava aminao araka izay irinao. Dia sitrana ny zananivavy tamin’izay ora izay.
Talata, 24 Martsa 2015
2 Kor 13, 5 – 10
5 Diniho ny tenanareo, na mitoetra amin’ny finoana hianareo, na tsia; izahao toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin’ny tenanareo, fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona nolavina hianareo? 6 Nefa manantena aho fa ho fantatrareo fa izahay dia tsy olona nolavina. 7 Ary mangataka amin’Andriamanitra izahay mba tsy hanao izay ratsy hianareo, tsy ny hisehoanay ho olona voazaha toetra anefa, fa ny mba hanaovanareo izay tsara, na dia ho toy ny olona nolavina aza izahay. 8 Fa tsy mahavita na inona na inona hanohitra ny marina izahay, fa hampandroso ny marina kosa. 9 Fa faly izahay, raha malemy izahay, fa hianareo no mahery; ary izao no angatahinay, dia ny fanatanterahana anareo. 10 Izany no anoratako izany zavatra izany, raha tsy eo aminareo aho, fandrao, rehefa tonga aho, dia hanao izay mafy araka ny hery izay nomen’ny Tompo ahy ho fananganana, fa tsy ho fandravana.
Alarobia, 25 Martsa 2015
Isa 48, 9 – 11
9 Noho ny anarako dia ononiko ny fahatezerako, ary mba hiderana ahy dia manindry fo ny aminao Aho, Mba tsy hamongorana anao.
10 Indro, nodioviko ianao, nefa tsy toy ny volafotsy; Efa nizaha toetra anao tao amin’ny memy fahoriana Aho.
11 Noho ny tenako, eny, noho ny tenako ihany no anaovako izany; Indrisy, lotoina ny anarako! Ary ny voninahitro tsy homeko ny hafa.
Alakamisy, 26 Martsa 2015
Sal 11, 4 – 7
4 Jehovah dia ao amin’ny tempoliny masina,
Ny seza fiandrianan’i Jehovah dia any an-danitra;
Ny masony mijery, eny, ny hodi-masony mizaha toetra ny zanak’olombelona.
5 Jehovah mizaha toetra ny marina;
Fa ny ratsy fanahy sy ny mifaly hampidi-doza dia samy halan’ny fanahiny.
6 Handatsaka fandrika amin’ny ratsy fanahy Izy
Tahaka ny fandatsaka ranonorana;
Afo sy solifara ary rivo-mahamay no ho anjara kapoakany.
7 Fa marina Jehovah, ka fahamarinana no tiany;
Ny mahitsy no hahita ny tavany.
Zoma, 27 Martsa 2015
Mar 7, 24 – 30
24 Ary niala teo Jesoa ka lasa nankany amin’ny sisin-tanin’i Tyro sy Sidona; dia niditra tao an-trano Izy, ary tiany tsy ho fantatry ny olona izany; kanefa tsy nahazo niery Izy. 25 Fa niaraka tamin’izay dia nisy vehivavy anankiray nandre ny aminy (ny zananivavy tanora dia azom-panahy maloto), dia nankao ka niankohoka tamin’ny tongony. 26 Ary jentilisa ravehivavy, avy amin’ny firenena Syro-foinika; dia nangataka taminy izy mba hamoaka ny demonia amin’ny zanani-vavy. 27 Fa hoy Jesoa taminy: Aoka ho voky aloha ny zaza; fa tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an’ny amboakely. 28 Fa ravehivavy namaly ka nanao taminy hoe: Eny, Tompoko, kanefa na dia ny amboakely ao ambanin’ny latabatra aza dia mba mihinana ny sombintsombin’ny mofon-jaza ihany. 29 Dia hoy Jesoa taminy: Noho izany teny izany mandehana hianao; efa nivoaka tamin’ny zanakao-vavy ny demonia. 30 Ary raha tonga tao an-tranony ravehivavy, dia hitany nandry teo ambonin’ny farafara ny zanani-vavy, ary ny demonia efa nivoaka taminy.
Sabotsy, 28 Martsa 2015
Mat 13, 24 – 30
24 Ary nanao fanoharana hafa koa taminy Izy ka nanao hoe: Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voa tsara tany an-tanimbariny; 25 fa raha natory ny olona, dia avy ny fahavalony ka namafy voan-tsimparifary teny amin’ny vary, dia lasa nandeha. 26 Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsimparifary. 27 Dia avy ny mpanompon-dralehilahy ka nanao taminy hoe: Tompoko, tsy voa tsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao? Koa avy taiza kosa ny tsimparifary? Dia hoy izy taminy: 28 Fahavalo no nanao izany. Ary ny mpanompony nanao taminy hoe: Koa tianao va handehananay hanongotra sy hanangona azy?29 Fa hoy izy: Tsia, fandrao, raha manongotra ny tsimparifary hianareo, dia hongotanareo miaraka aminy koa ny vary. 30 Aoka ihany hiara-maniry izy roroa ambara-pihavin’ny fararano; ary amin’ny fararano dia holazaiko amin’ny mpijinja hoe: Angony aloha ny tsimparifary, ka ataovy amboarany mba hodorana ; fa ny vary dia taomy ho any an-tsompitro.
Alahady, 29 Martsa 2015
Jao 12, 12 – 19
12 Ary nony ampitson’iny ny vahoaka betsaka, izay tonga ho amin’ny andro firavoravoana, rehefa nahare fa hankany Jerosalema Jesoa, 13 dia naka sampan-drofia ka nivoaka hitsena Azy sady niantso hoe: Hosana! Isaorana anie ny Mpanjakan’ny Isiraely, Ilay avy amin’ny anaran’i Jehovah (Sal. 118. 26).
14 Ary Jesoa nahita zana-boriky anankiray, dia nitaingina azy, araka ny voasoratra hoe: 15 « Aza matahotra ry Ziona zanakavavy; indro, avy ny Mpanjakanao mitaingina zanaboriky » (Zak. 9. 9).
16 Izany zavatra izany dia tsy fantatry ny mpianany tamin’ny voalohany; fa rehefa niditra tamin’ny voninahiny Jesoa, dia vao nahatsiaro izy fa voasoratra hilaza Azy izany zavatra izany, ary efa nataony taminy izany.
17 Ary nanambara Azy ny vahoaka izay teny aminy, fony Izy niantso an’i Lazarosy hivoaka tamin’ny fasana ka nanangana azy tamin’ny maty.18 Ary izany koa no nitsenan’ny vahoaka Azy, satria efa reny fa nanao izany famantarana izany Izy.19 Ary tamin’izany ny Fariseo dia nifampilaza hoe: Hitanareo fa tsy mahefa na inona na inona akory hianareo; indro, efa lasa manaraka Azy avokoa izao tontolo izao.
Alatsinainy, 30 Martsa 2015
Rom 5, 1 – 5
1 Koa amin’izany, satria efa nohamarinina tamin’ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika. 2 Tamin’ny alalany koa no efa nahazoantsika fanatonana amin’ny finoana ho amin’izao fahasoavana itoerantsika izao, ka dia aoka isikahifaly amin’ny fanantenana ny voninahitr’Andriamanitra. 3 Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin’ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana; 4 ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazaha toetra; ary ny fahatsaram-panahy voazaha toetra mahatonga fanantenana; 5 ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny Fanahy Masina, Izay nomena antsika, no nentiny nampidina ny fitiavan’Andriamanitra ho ao am-pontsika.
Talata, 31 Martsa 2015
Sal 66, 8 – 12
8 Misaora an’Andriamanitsika, ry firenena;
Ary asandrato ny feo fiderana Azy,
9 Izay mampitoetra ny fanahintsika amin’ny fiainana
Ka tsy mamela ny tongotsika hangozohozo.
10 Fa efa nizaha toetra anay Ianao, Andriamanitra ô;
Efa nanadio anay Hianao, tahaka ny fanadio volafotsy amin’ny memy.
11 Efa nampiditra anay tamin’ny fandrika Ianao;
Efa nanisy enta-mavesatra teo am-balahanay Ianao.
12 Efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay Ianao;
Nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay;
Fa nitondra anay nivoaka ho amin’ny fitahiana mahatretrika Ianao.
By sergino| 2020-03-01T04:21:13+00:00	novembre 19th, 2019|Fiainan'ny fiangonana|Commentaires fermés sur Mofon’aina
Copyright 2020 FJKM Avaratr’Andohalo. All Rights Reserved